Ukubaluleka kolawulo oluphezulu olubonakalayo kuyilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
La ulawulo olubonakalayo Inesitshixo esinye sokwenza uyilo kwaye yileya xa usenza imifanekiso yokuprinta okanye yokusetyenziswa kwedijithaliUmxholo kufuneka ucwangciswe kakuhle. Oko kukuthi, ayisiyonto iluncedo kuphela ukuba uyile, kodwa ikwayimfuneko zithathele ingqalelo bonke ubuqhetseba obunikwa yingqokelela, ezinje, umzekelo, ubungakanani, izikhombisi, umbala, umahluko, iindawo kwaye ikakhulu, ukwazi kunye / okanye ukuqonda ukuba yintoni ekufuneka ishiywe kwaye yintoni ekufuneka ibandakanywe kulwakhiwo.
La ulawulo olubonakalayo inokuchazwa njengendlela efanelekileyo yokuququzelela yonke imixholo, ngenjongo yoku dlulisa umyalezo eluntwini ngeyona ndlela ibhetele.
1 Iindidi zokujonga iphepha
1.1 Ubume be-F
1.2 Ubume be-Z
1.4 Isithuba kunye noburhabaxa
Iindidi zokujonga iphepha
Kufuneka kuthiwe wonke umntu funda ukusuka phezulu kuye ezantsi kwaye iyenza ngokubanzi ukusuka ekhohlo ukuya ekunene; nangona ithatha ngaphezulu kancinci kunokubona ukuba iphepha lifundeka njani.
Olunye uphando lwakutsha nje lubonisa ukuba abafundi baqala "Iskena”Iphepha elipheleleyo uze uqalise ukulifunda; Olu scan lunemilo emi-2, eyi-f kunye no-z:
Yeyona esebenzayo xa isiza amaphepha anzimaOko kukuthi, abo banombhalo obanzi kakhulu, njengakwimeko yamanqaku okanye umxholo webhlog.
Iqukethe umfundi uqala ngokujonga umphezulu womxholo ephepheni, kuba kulapho ulwazi oluphambili luhlala lukhona kwaye ke iyaqhubeka ukwehla idiagonally kwikona ejongene nephepha, kwaye yenza inkqubo efanayo emazantsi ephepha.
Ngokuqhelekileyo, kuqala abantu bafunda ukubhala okukhulu kwaye ubukhulu bayo, ngakumbi kwisicatshulwa, buya kuba njalo isixhobo esinamandla kakhulu, ebeka bucala imigaqo yokufunda iphepha kwiphepha ukusuka phezulu kuye ezantsi kwaye ushiye ekunene.
Isithuba kunye noburhabaxa
Ukuba ushiye ngokwaneleyo indawo engalunganga ejikeleze iqhosha okanye ukuba ushiya imigca yomhlathi enesithuba esaneleyo phakathi kwabo, izinto ziya kuba lula ngakumbi ukuzifunda.
Isithuba esimhlophe ngendlela efanayo sinceda umxholo ukuba ufundeke ngokulula kwaye ngowama-2004, kwenziwa uphando apho kwavezwa ukuba ukusetyenziswa kwe izithuba ezingenanto phakathi kwemida esecaleni kunye nemihlathi yonyusa ukuqonda komxholo ukuya kuthi ga kwi-20%, kuba kulula ukuba ifundwe ngumfundi.
Ubume benxalenye yayo, ibhekisa kumbutho nezithuba okubhaliweyo kunye nezinye izinto kufuneka zibenazo xa kulungiswa umxholo wephepha lewebhu.
Ukukhetha kwe uhlobo lohlobo lomxholo wephepha, kubalulekile xa kusekelwa ulawulo oluphezulu olubonakalayo kwaye yile meko, olunye lwezona mpawu ziphambili ekufuneka zijongwe kwifonti sisitayile kunye nobunzima. Kwakhona Ukusetyenziswa kweekekeleyo ibaluleke ngokulinganayo.
Los imibala eqaqambileyo ibamba iliso ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu kunemibala ethambileyo okanye engwevu, ke kuyacetyiswa ukuba ukwenze konke oku, ukuze ubambe umdla wabafundi, eyinjongo yokuphela oyifunayo.
Ngokubanzi, ubeko lwephepha ludla ngokwenziwa ngokweigridi zombini zithe tye kwaye zime nkqo.
Kule nkqubo a uhlobo olutsha lolawulo olubonakalayo, esihlala siphula iigridi ezichaziweyo, kule meko, ezo tekisi zibekwe kwigophe okanye kwi-diagonally, zihlala zikwazi ukubonakala ngaphezulu kolunye ulwakhiwo apho iibhloko zombhalo zibekwe khona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ukubaluleka kolawulo oluphezulu olubonakalayo kuyilo
UKessle silva sitsho
Ulawulo lolawulo olulawulwa ngokugqibeleleyo kusetyenziswa indawo ekugxilwe kuyo, yenye yezona zinto zinamandla zoyilo.
Phendula uKessle Silva
Izixhobo zokwenza imifanekiso emihle kuthungelwano lwentlalo